Konak Tramvayı 2 Temmuz'dan İtibaren Ücretli Olacak | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirRugta Ganacsi ee Xammaatka ee 2 ayaa la bixin doonaa laga bilaabo bisha Luulyo
29 / 06 / 2018 35 Izmir, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, TURKEY, taraamka
Hawlaha horey loogu sii wado rakaabka X, oo bilaash ah tan iyo 24 Maarso, waxaa lagu dhammeystirey dhismaha Tramway. Ka dib imtixaanada jaamacadda, 2 waxaa la bixin doonaa Isniinta Julaay. Kadib howlgalka rasmiga ah ee Mashruuca Tareenka ee Konak, kaas oo lagu daray iskuulada, suburban, baska iyo badda, ayaa Agaasimaha Guud ee ESHOT wuxuu fulin doonaa sharciyo cusub oo la xiriira khadadka qaarkood.
Dadka reer Izmir ayaa loo isticmaalay taraamka. Socdaalka habka dhismaha ee Tramway, kaas oo socday tan iyo bishii Maarso, waxa uu ku dhammaaday nidaamka hawlgalka ka hor. 2 Ilaa Luuliyo Isniinta, khadka 12,6 ee khadka Halkapınar-Fahrettin Altay ayaa lagu bixin doonaa khidmad. Arbacada ka dib markii ugu horeysay ee 06.00 10 kala soocaan xilliyada maalintii, waxay sii socon doonaan ilaa 00.00 habeenkii. Sida nidaamka gaadiidka ee kale ee degmada caasimadda ee Izmir, 90 ayaa sidoo kale laga heli karaa taraamada.
Gawaarida 21 waxay adeeg u fidisaa mashaariicda Konak Tramway, kaas oo lagu dhejiyo tareenka, tareenka, baska iyo badda.
Xeerarka cusub ee basaska
Iyadoo bilawga adeegga lacagta lagu bixiyo khadka tareenka ee mulkiilaha ee magaalada caasimadda ah ee Izmir uu bixiyay magaalada, ayaa Agaasimaha Guud ee ESHOT wuxuu raacayaa xeerarka cusub ee khadka basaska, laga bilaabo 2 July Isniintii. Sida tan oo kale, khadadka cusub iyo jidadka soo socda ayaa ah sidan soo socota:
Balchova-Narlıdere-Mustafa Kemal Beach Boulevard;
No. 12 Fahrettin Altay-Halkapınar Metro Drive, No. 169 Balcova- guri nagaadi, No. 554 kansali khadadka Narlidere-ciidankii. In la barbardhigo, waxaa laga furay laba xadhig oo cusub. Sabah (06: 00-09: 00) iyo casho (16: 00-20: 00) u adeegi doonaa iyada oo loo marayo wadada İnönü u dhexeeya saacadaha guri nagaadi 669 No. Balcova- iyo 654 No. khadadka Narlidere-ciidankii waxaa qaaday adeegga. The ka baxsan saacadaha kuwan; Rakaabka socday Fahrettin Altay Transit Center jihada guri nagaadi ah via taraamka ama metro line, rakaabka awoodaan in ay bixiyaan gaadiidka si ay u tagaan jihada Alsancak by samaynta kala iibsiga inay line taraamka waxay noqon doontaa. Mustafa Kemal Boulevard Coast gaadiidka dadweynaha iyadoo line taraamka waxaa lagu soo bandhigi doonaa.
121 No. Bostanli Pier-ciidankii, 63 No. Evka 3 Metro-ciidankii iyo 802 No. Egekent Drive-ciidankii khadadka subaxdii (06: 00-09: 00) iyo casho (16: 00-20: 00) saacadood Isagu wuxuu istaagi doonaa dhexeeya Talatpaşa Boulevard.
The ka baxsan saacadaha kuwaas oo laga furi doonaa adeegyada cusub 921 No. Bostanli Pier-Alsancak Station, 963 No. Evka 3 Metro-Alsancak Station, samaynta kala iibsiga inay khadadka 912 No. Egekent Drive-Alsancak Station la line taraamka Alsancak iyo gaari ah guri nagaadi ah.
70 stop ugu dambeeya ee line Metro No. Şirinyer Drive-Halkapınar waxaa la qaban doonaa sida Tinaztepe. Iyadoo line this, khadadka dhulka hoostiisa 80 No. Bozyaka-Halkapınar Metro 90 No. Gaziemir-Halkapınar Metro 255 No. Üçyol Metro-Halkapınar Metro 581 No. F.Altay-Halkapınar subaxdii (06: 00-09 : 00) iyo casho (16: 00-20: 00) u adeegi doonaa inta u dhaxaysa saacadaha.
furi doonaa adeeg cusub oo ka baxsan saacadaha kuwaas 470 No. Tinaztepe-Lausanne Square, 680 No. Bozyaka-Lausanne Square, 691 No. Gaziemir-Lausanne Square, 655 No. Üçyol Metro-Lausanne Square, 681 No. F.Altay samaynta kala iibsiga Dugsiga Sare ee Atatürk -Loz Square stop taraamka la khadadka in ay gaaraan line taraamka ka Alsancak iyo Halkapınar ah.
Halkapınar Metro-Konak oo leh lambarka 251 ayaa la tirtiri doonaa khadadka Kahramanmaras-Konak ee lambarka 951 la galin doono.
Intaa waxaa dheer, joogsiga ugu dambeeya ee xariiqda, oo ku yaal Talatpaşa Boulevard, ayaa loo qaadi doonaa xarunta Xalkapınar Metro 253. Waddada ayaa lagu qaban doonaa jihada Xarunta Xalkapınar Metro 2 si ay u isticmaasho Shaqaalaha Waddada ka dib Sehit Street.
Kala xiriir macluumaadka su'aalaha
ESHOT General Directorate, ururka ee muwaadiniinta doonaya si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan website cusub xeerarka (www.eshot.gov.t ka) iyo sidoo kale 320 0 ayaa sidoo kale ka faa'iidaysan karaan 320 khadadka la tiriyey isgaarsiinta ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in ay u adeegi doonaan shaqaalaha maalinta-duurka ee xarunta iibsiga ka dhanka ah qaska ay suurtagal tahay.
Xakamaynta waxaa lagu sameeyaa Sadkayular - Konak - Alsancak - Halkapınar (Konak) Tram
Waana u Wanaagsan Caalamka. Konak Tram, 1 Bilaash ilaa Luuliyo
Gaadiidka Dadweynaha ee YKS Ardayda iyo Shaqaalaha Istaandarada ee Bilaashka ah